I-China Framless Glass Folding Door Kinzon30 ifektri nabaphakeli | Kinzon
Isicabucabu Esingafakwanga Ingilazi Esisonga Kinzon30
I-Framless ingilazi yokugoqa umnyango-Kinzon30 inelungelo lobunikazi futhi idlulisile umthwalo womoya, umthwalo wamaphoyinti kanye nokuhlolwa komthelela. Amaphrofayili we-aluminium kanye nezindlela zokubamba nezokuvula ze-Framless ingilazi yokugoqa umnyango-Kinzon30 zenziwe ngezinto zokubonisa isimo sezulu. I-Framless ingilazi yokugoqa umnyango-Kinzon30 inewaranti yomkhiqizo yeminyaka eyi-10.
Ingilazi engenakubuya yokugoqa umnyango-Kinzon30
Amapaneli we-Framless ingilazi yokugoqa umnyango-Kinzon30 enziwe ngengilazi yezokuphepha eyenziwe lukhuni. Ingilazi engenakubiyelwa kwengilazi umnyango-Kinzon30 uhambisana nezidingo eziqinile ze-EC ezinqunyelwe / i-PSB e-Singapore / Gost eRussia.
kungabi nalutho ngokuthe mpo futhi ipaneli ngalinye lengilazi lingavula ngokwahlukana ukuze kuhlanzeke kalula, umoya omusha kanye nokukhanya kwelanga, bese uvala ngokubuka okusobala okusobala.
iphrofayli lesinxephezelo ngenhla lingaguqula igebe phakathi kwewindi nophahla ukwenza uhlelo lube luvundlile.
izinhlobo ezimbili zesikulufa sokulungiswa, esisodwa ukukhulisa iphrofayli sesinxephezelo, esinye sehlisa iphrofayli yokuncephezelwa.
amasondo amakhulu athwala ibhola angakwazi ukusekela isisindo esingaphezu kwe-100KGS kwiphaneli ngayinye yengilazi futhi enze amaphaneli engilazi ashelele kahle
Ama-roller awalokothi agxume:
ngenxaso ephezulu yepulasitiki ingxenye, amaphaneli engilazi angakwazi ukuhamba kahle ngisho noma edabula umgodi wokuvula kanti ama-roller awalokothi agxume.
I-Framless ingilazi yokugoqa umnyango-Kinzon30 isebenzisa i-SS304 kuwo wonke ama-axles we-roller ukusekela amaphaneli amakhulu weglasi.
Amapaneli awapheli amandla:
okokusekelwa okhethekile okokwethenjwa okuphezulu kungavikela amaphaneli engilazi angawa lapho evulekile.
Ububanzi be-max bungama-900mm kanti ukuphakama okungama-3000mm kwiphaneli ngayinye yengilazi.
Sebenzisa i-nylon yokuvikela ipulasitiki kumaphrofayili engilazi ukugwema ingozi futhi ukwakheka kwesitebhisi kungafinyelela kangcono ukubekwa uphawu kohlelo.
Ukubekwa uphawu okungcono:
I-Framless ingilazi yokugoqa umnyango-Kinzon30 ayinalo igebe phakathi kwamaphrofayili wethrekhi kanye namaphrofayili engilazi anezinto ezikhethekile.
Esedlule: Framless Glass Door Kinzon30plus
Olandelayo: Eshibhile ye-Aluminium Awning Window Ares50
Izinhlelo ze-Balcony Glazing
Uhlelo Lokugqekeza Olwe-Framless Balcony
I-Framless Glass Sliding Door Kinzon20
I-Folding Window Curtain Kinzon10
Uhlelo lwe-Balcony Glazing System Kinzon08
I-Glass Window Door Kinzon10
Framless Glass Door Kinzon30plus